China Industry News Factory - Cheap Industry News Supplier, ekspootu - Part 2
The US Hoverboard ọkụ kpatara otu ọnwụ na abụọ unan
Post oge: 03-15-2017
Dị ka US media kọrọ na March 11, 2017, na Harrisburg obodo maka hoverboard ọku gbawara merenụ ada ọnwụ nke a nwa, ụmụ agbọghọ abụọ na-merụrụ ahụ, na mgbakwunye na a firefighters merụrụ ahụ. Dị ka firefighters kọwara, na 8 pm, iji gbapụ, otu n'ime ndị ahụ tara site ...GỤKWUO »
Electric Hoverboard eme ka ndụ ọzọ ukporo & free
Post oge: 03-07-2017
N'oge, sports aghọwo mmasị eme ka ụlọ ọrụ gens, n'ọfịs ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ, na ụbọchị nke na kọmputa, ọ bụla akụkụ ahụ na-enweghị ihe omumu, karịsịa ewekarị iche iche obere nsogbu na akụkụ dị iche iche nke ahụ ya, dị ka akpịrị n'olu, òké aka, anya akọrọ, id ...GỤKWUO »
Na mmekọrịta dị n'etiti Mankeumman 2272 Asambodo & Hoverboard
Post oge: 02-07-2017
Hoverboard na-akpọ onwe-guzozie scooters, n'ihi na aga afọ 'hoverboard ọku merenụ, The US Consumer Product Safety Association (CPSC) ka a mara ọkwa na niile onwe-guzozie skuuta ma ọ bụ Hoverboard Nsukka, Importers na nkesa nke counterbalanced ugbo ala ga-soro .. .GỤKWUO »
The Uru nke na-agba a hoverboard
Post oge: 12-26-2016
Hoverboards dị nnọọ ewu ewu taa na ọ na-a na-emekarị n'ihi na na, na-eto eto na aults na-a obere njem na egwu onwe itule hoverboard.If na ị chọrọ ịzụ aka free hoverboard maka ụmụaka, enyi ma ọ bụ onwe gị, ị nwere ike nweta ọtụtụ informations si internet banyere 2 wheel ...GỤKWUO »
Gịnị mere electric skuuta ma ọ bụ skateboard otú nabatara na ahịa?
Post oge: 12-14-2016
Tinye afọ ọhụrụ, na-electric itule skuuta ubi mpi a na-adịwanye ike. Isi na-emepụta na-ulo oru ha ọhụrụ ngwaahịa, na-inosiike na mụbaa ya mmetụta na ọnọdụ na n'ji. Na-ede na mgbe na-ewere na otu n'ime ndị kasị mkpa co ...GỤKWUO »
Gịnị mere na itule skuuta na-acha ọcha-olu akwa ọrụ artifact?
Post oge: 11-22-2016
Mgbe ị na-aga ọrụ, gịnị ka ị na-atụ egwu ọtụtụ? M kwere na ọtụtụ ndị ga-asị na ha bụ ndị mbubreyo, ọ gwụla ma ha na-emetụta afọ ịta mmiri ọgwụgwọ na ụzọ ha na-arụ ọrụ. Ọtụtụ ndị na-aga ọrụ ụgbọ ala na ụzọ ụgbọ oloko na-agba ịnyịnya, n'ezie, nwere ike họrọ pụọ. Na n'etiti ha atọ nwere onwe ha disadv ...GỤKWUO »
Ị maara ndị a bara uru Atụmatụ maka guzozie skuuta ịnọgide na-enwe?
Post oge: 11-03-2016
Olee otú ọtụtụ ndị ị maara maka guzozie skuuta ịnọgide na-enwe Atụmatụ? Taa ka Koowheel Editor ịme gị. Mmezi usoro adịzi skuuta ma ọ bụ hoverboard: 1. nke Koowheel guzozie skuuta ike iche na ọrụ nke wheel, ya mere anyị kwesịrị na-eme ka ndị kwesịrị ekwesị inspecti ...GỤKWUO »